हिरासतबाट फरार थुनुवा नियन्त्रणमा - नेपालबहस
हिरासतबाट फरार थुनुवा नियन्त्रणमा
| १९:२९:१५ मा प्रकाशित
२५ माघ, खलङ्गा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको हिरासतबाट शनिबार राति फरार रहेका तीन थुनुवालाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीको हिरासतबाट राति २ः०० बजे भागेका तीनजनालाई आज बिहान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी माधव काफ्लेले बताए ।
चन्दननाथ नगरपालिका–४ का ज्यान मुद्दाका थुनुवा यज्ञ सार्की, खगेन्द्र सुनार र सवारी ज्यान मुद्दाका थुनुवा नितेश शाही रातिदेखि फरार भएका थिए । सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा थुनुवा फरार भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाईंले बताए ।
फरार रहेका तीनैजनालाई चन्दननाथ–९ बाट प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । सो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र प्रदेशस्तरीय छानबिन समिति गठन हुने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
सुन्दरीजलस्थित सुरुङको भित्री ढोका बन्द गरियो १६ मिनेट पहिले
कांग्रेसले तत्काल कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने : नेता केसी ४१ मिनेट पहिले
फागुन २० गते नेकपाको नाम विवादमा फैसला हुने ५३ मिनेट पहिले
एकैपटक ३१ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन ५६ मिनेट पहिले
‘टिकटक क्विन : सुपरम्यान’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ( भिडियो ) ८ घण्टा पहिले
गाउँपालिकाद्वारा नागरिक पेन्सन योजना सुरुवात, के हो नागरिक पेन्सन ? ५ दिन पहिले
ललितपुर प्रहरीको ठुलो सफलता, ३० लाखसहित जुवाडे पक्राउ ४ दिन पहिले
एनआरएनएले ल्यायाे विश्व व्यापीरुपमा टेली हेल्थ सेवा १ हप्ता पहिले
मुल्य किन बढाएको ? ७ दिन पहिले
नाै एयरलाइन्सलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता २ हप्ता पहिले
शुरु भयो पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशन १ हप्ता पहिले
के पाउलान त चौध लाख परिवारले भूमिपूर्जा ? २ हप्ता पहिले
अब काेराेना निको भएकाकाे प्लाज्मा अन्य जिल्लामा पठाइने ४ महिना पहिले
तीनजना मन्त्री थप्न ओली र प्रचण्ड सहमत ५ महिना पहिले